.:: Yoges Homepage ::.
Home | Article | Portfolio | Service | Contact
Gallery Article Download Help
सन्तानको चाहना - रन्जन राज ढुंगेल
सरिनाले विवाह त गरिन तर उनलाई विवाह पश्चात सन्तान जन्माई हाल्न मन लागेन । उनी आफ्नो परिवारको जग बलियो नभई सन्तान नजन्माउने पक्षमा थिइन । उनलाई यस कुरामा उनका पतिले पनि साथ दिएका हुन् । विवाह गरेको एक वर्षमा नै सन्तान जन्माउदा सन्तान त समयमै हुर्कन्छन् तर आकाशिदो महंगी अनि सामाजीक परिवेशमा सन्तानलाई हुर्काउन पढाउन निकै गाह्रो हुने भएकाले उनले अनेकौं सामाजीक गाली गलौज वीच आफ्नो अडान कायम गरिन । उनी सोरोजगार थिइन उनको कमाई मासिक सात हजार रुपैया हुन्थ्यो अनि उनको पतिको कमाई पनि मासिक ११ हजार रुपैया जति थियो । खाना र अन्य खर्चमा नै उनीहरुको १५ हजार भन्दा वढि खर्च थियो । उनीहरुको कमाईको हाराहारीमा नै खर्च हुने भएकोले सन्तानका लागि थप आर्थिक व्यवस्था नहुन्जेल सन्तान नजन्माउने पक्षमा अडिएको पनि एक हिसावले ठिकै मान्न सकिन्थ्यो । सन्तान जन्मेपछि कम्तिमा पाँच हजार रुपैया सन्तानका लागि छुट्टाउनुपर्ने देखिन्थ्यो । सरिनाका अधिकाशं नातेदार पनि उनी जस्तै नै थिए तर उनीहरुका सन्तानहरुले पढ्ने विद्यालयको मासिक शुल्क चार हजारको हाराहारीमा थियो । सामाजीक रहनसहनमा वाँचे पछि आफूले नसके पनि देखासिकि अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा पनि सरिनाले सन्तान जन्माई हाल्ने आँट नगरेकी हुन् ।
'रवि' सरिनाको मनमिल्ने जीवनसाथी । सरिनाले जस्तो जस्तो चाहन्थी रविले सबैकुरा मान्थ्यो । रविले श्रीमतीको कुरामा कहिले पनि औला उठाएन । रवि अल्लि फरक किसिमको मान्छे थियो । उसले विवाह गरेपनि पारिवरिक जिम्मेवारी वहन गरेन । सम्पूर्ण निर्णय अनि योजनाहरु सरिनाको हुन्थ्यो । उसले मात्र आफ्नो मत जाहेर गर्दथ्यो । उसलाई पारिवारिक उल्जन भन्दा श्रीमतीका निर्णयहरु नै ठिक लाग्थ्यो । उसले सरिनालाई खुकुलो पार्नुको अर्थ उ आफै पनि हलुङ्गो हुनु थियो । उसले पारिवरिक कचकचले गर्दा विवाहलाई सहर्ष स्वीकारेको थियो । कम्तिमा आठ नौ वटी केटीहरु मध्येबाट उसलाई सरिना किन मनपर्‍यो थाहाछैन ।
उसले आफ्नी भावि जीवनसंगीनी संझेर गरेका प्रश्नहरु कतिले अन्तर्वार्ता भने, कतिले विवाह अगाडि नै फर्माइसहरु गर्न थाले अनि कति केटी उसको नजरमा पर्न सकेनन् । सरिना र रविको विवाहको कुराकानी भैरहेको छ भन्ने सुइको पनि नपाउँदा ती दुईको भेट वर्षातमा ओत लाग्दा वसस्टपमा भएको थियो । पानी घनघोर पर्दै गएपछि वसस्टपबाट ती दुईले नजिकैको पसलको साहारा लिएका थिए । उनीहरु वीच कुनै वोलचाल भएको थिएन तर पनि चिया पसलमा वाँकी वचेको एउटा टेवुलमा गएर दुवै वसें । पानीका कारण ओत लाग्न आउनेहरुको संख्या अधिक भएकाले धेरै समयसम्म उनीहरुको टेवुलमा खानेकुराको सोधपुछका लागि कोही आएनन् । उनीहरुले वर्षात अनि जाडोको विषयमा मुस्किलले एक मिनेट जति वात गरे होलान् । सरिनाले चिया मगाई रविले पनि मगायो । एक्लोपनमा साथ दिने मोवाइललाई दुवैले साथी वनाए । अलि अलि काली, कपाल काँधसम्म पालेकी, हेर्दा शान्त स्वभावकी सरिना र गहुगोरे, अग्लो अनि खाइलाग्दो रविका वीच वेलावेलामा आँखा जुधे पनि मन्द मुस्कानमा नै दुवै रमाएका थिए । आधाघण्टासम्म संगै वस्दा पनि दुवैले एक अर्काको परिचय मागेनन् ।
करिव एकहप्ता पछि साँझको प्रहरमा केटी हेर्नका लागि रवि वेकरी क्याफे पुग्यो । रविका बाआमा, दिदि र दुई अपरिचित एउटै टेवुलमा वसेर गफ गरिरहेका थिए । तर विवाहका लागि योग्य कन्या त्यस टेवुलमा थिइनन् । अगाडिको टेबुलमा दुइजना युवती थिए त्यसमध्ये एक जना वर्षातमा ओत लाग्दाकी आँधा घण्टाकी साथी थिइन । मन्दमुस्कान सहित रवि बाबाआमा भएको टेवुलमा पुग्यो । रविले आक्कल पनि गर्न सकेको थिएन की अस्ति वर्षातकी आधा घण्टाकी साथी उसकी जीवनसाथीका लागि हाजिर होलिन भनेर । संगै एकै टेवुलमा वसेर वातचित गर्ने मौका दिएपछि दुवैले एक अर्कालाई हेरें अनि मन्दमुस्कान । यस्तो थाहापाएको भए त अस्ति नै कुरो टुंगो लाउनहुन्थ्यो नी हगि, रविले सरिनालाई प्रश्न गरयो । खोई सरिनाले उत्तर टुंग्याई । विवाह भएपनि नभएपनि दुवै एक अर्काको साथी हुने कुरामा भने दुवै राजी भए अनि दुवैले आफ्नो मोवाइल नम्वर साटासाट गरें । दुवै परिवारको चित्त बुझ्यो अनि विवाह सम्पन्न भयो । रविसंग पहिलो रातमा नै सरिनाले सन्तान पछि जन्माउनका लागि अनुरोध गरेकी थिई अनि रवि पनि सहमत भएको थियो ।
विवाह गरेको एक वर्षसम्म पनि सन्तानका लागि उनीहरुले सुरसार गरेका थिएनन् । रविले सरिनालाई एकदमै माया गर्दथ्यो उनीहरु एक असल प्रेमीप्रेमीका जस्ता देखिन्थे । फुस्रदका धेरै समय रविले सरिनासंग विताउने हुँदा उसले अरु साथीसंगी नातागोताहरुलाई समय दिइरहेको थिएन । त्यसैले उसले जोइटिङरेको संज्ञा पनि पाइसकेको थियो । उनीहरु खुशी थिए तर सम्पूर्ण परिवारको निर्णय सरिनाले लिएकी हुनाले भने कहिलेकाही उनीहरु वीच झगडा हुनु स्वभाविक पनि हो । कुनै पनि जिम्मेवारी वहन नगरी पतिको रुपमा रहिरहन पाएकोमा उसले सरिनाको निर्णयमा कहिलै खोट देखेन । जसको फलस्वरुप विवाह गरेको पन्ध्र महिनामा उनीहरु परिवारबाट अलग्गिएर भिन्दो वसें । जम्मा दुईजनाको परिवार भएकोले सधै सुनसान नै हुनेगर्दथ्यो घर । काम गर्नको लागि सरिनाले एउटा काम गर्ने केटालाई घरमा राखि । हरेराम नजिककैको स्कूलमा दिनभर पढ्दथ्यो भने विहान वेलुकी घरको काममा व्यस्त हुन्थ्यो । सरिनालाई स्वतन्त्रताको अनुभव भएको थियो । हुन त उनीहरुको मूल घरमा पनि खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो त थिएन तर सासु ससुरा अनि नन्दहरुका वीच जति सुकै स्वतन्त्रता भएपनि कतै वाधिएको अनुभव गरेकी थिई सरीनाले । विस्तारै घरका जिम्मेवारीहरु थपिदै गएपछि रविले थप आम्दानीका लागि विहान वेलुकी अरु कामहरु गर्न थाल्यो । सरिनाको सबैकुरा पोख् साथी वन्न पुगेको थियो हरेराम । उमेरले वाह्र तेह्र वर्षको हुदो हो मान्छे खाइलाग्दो नै थियो । विचरा कान्छिआमाको मारमा परेर पिडित भएको रहेछ । राम्ररी खान पनि नपुग्ने घरमा जन्मेता पनि उसले सरिनाको घरमा राम्रै इज्जत पाएको थियो । घरको आधाउधो काम हरेरामले नै पुरा गर्ने गर्दथ्यो । सरिनाले पनि खुव माया गर्दथी ।
सरिनाले जव वच्चाको चाहना राखि तव रविले एक दुई महिना हेर्नको लागि भन्यो किनकी रविले दुईवर्षका लागि स्वीडेनमा ट्रेनिङको लागि गरेको निवेदन लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो । उमेरले ३० पार गरी सकेका जोडीले सन्तान जन्माउनका लागि लगभग तयारी गर्दा गर्दै रविको निवेदन स्वीकृत भयो । उ दुईवर्षका लागि स्वीडेन हानियो । घरमा सरिना एक्ली भएकी थिई । उ सोरोजगार भएकाले दिउँसभर त अफिस साथीसंगी संग नै व्यस्त हुन्थी । घरमा रविको वास त्यति नहुने भएकाले उसलाई विहान र सुझ खासै फरक परेन तर जव रात पर्दथ्यो ऊ विछ्यौनामा एक्ली हुन्थी उसलाई रविको अभाव खस्किन्थ्यो । सरिनालाई विभिन्न तर्कना अनि कोठामा भएका तस्वीर तथा दराजका परछाईले पनि तसा्रउन थाल्यो । सरिनालाई सबैभन्दा डरलाग्ने क्षण भनेको विजुली चम्कदा निक्लने आवाज र उज्यालो किरण थियो । कहिलेकाही राती विजुली चम्कदा रविसंग लपक्क टासिएर सुत्दथी । एक रात भयानक पानी परिरहेको थियो । रातको आठ वजेको हुदो हो हरेराम र सरिना टिभि हेरिरहेका थिए । मुसलधारे पानी र हावाका कारण वत्ती पनि निभ्यो । आकासमा विजुली चम्कदा कोठा नै उज्योलो हुन्थ्यो । कम्मर दुखेकाले सरिना ओछ्यानमा पल्टेर टि।भि हेरिरहेकी थिई । दिदि म आफ्नो कोठामा जाऊ हरेरामले सुत्नका लागि अनुमति माग्यो । हुन्छ वरु सुत्नुअघि मलाई कम्मरमा औषधी लगाइ देन उसले दुखेको कम्मरमा मालिस गर्ने विचार गरी । हरेरामले मलिस तेल लिएर आयो । सरिना कुर्ताको आधा भाग माथि उठाएर घोप्टो परेर सुतेकी थिई । हरेरामले निसंकोच मालिस तेल लिएर कम्मरमा मालिस गरिरहेको थियो । धेरै समय पछि पुरुषको स्पर्श पाएकी सरिना अत्यन्तै रोमान्चित हुदै थिई । विचरो हरेराम सकिनसकि मालिस गरिरहेको थियो । विजुली चम्कने क्रम तिव्र भएपछि सरिनाले हेरेरामलाई त्यही कोठामा सुत्नका लागि आग्रह गरी । हरेराम ले मानेको थिएन तर सरिनाको कुरालाई काट्न सकेन । हरेराम सरिनाको खाटको तल ओछ्यान लगाएर सुत्यो । रवि गएको दुई महिना नाघी सकेको थियो । ओछ्यानमा पल्टदै सरिनाले रविका यादमा निदाउने कोशिस गरि तर किन किन त्यस दिन सरिनालाई अर्कै खालको उन्मादले छाएको थियो । हरेराम पनि निदाउन सकिरहेको थिएन । दिदि मलाई निद्रा नै लागने म आफ्नै कोठामा जाऊ भनेर सरिनासंग अनुरोध गरयो । सरिनाले इजाजत दिन मानिन । वरु आइज यही पलङमा नै सुत् त छेउपट्टि सुत म भित्तामा सुतौंला । उसले हात समाएर नै हरेरामलाई ओछ्यानमा तानि । अप्ठ्यारो लाग्दा लाग्दै हरेराम पनि ओछ्यानमा नै सुत्यो । मालिस गर्दाको स्पर्शलाई भुली नसकेकी सरिनाले आफ्नो कम्मरमा फेरि पनि मालिस गर्ने विचार गरी र ढाड हरेराम पटि फर्काएर विस्तारै कम्मर मालिस गरिदिन आग्रह गरी । भर्खरको युवक वन्न लागेको हरेरामका हातले सरिनाको कम्मर ढाड मालिस गर्न लाग्यो । सरिनाले माथि पटिको कुर्ता फुकालिसकेकी थिई । उसलाई हरेरामको हात कम्मर ढाड हुदै विस्तारै अघि वढोस भन्ने अपेक्षा थियो तर हरेराम मालिस गर्दा गर्दै निदायो । सायद यौवनको चाख नपाइसकेको हुँदा उसले सरिनाको इच्छा वुझ्न सकेन । सरिना भने निदाउन सकिरहेकी थिइन । रविका कृयाकलापलाई सोच्दै आफ्नै हातको सहारामा विभिन्न कल्पनाहरु वीच सरिना निदाउन पुगी ।
विहान सरिना उठ्नु अघि हरेराम उठिसकेको थियो । हरेरामले आफ्नो नित्य कर्म सकिसके पछि पनि सरिना नउठेकीले चिया पकाएर सरिनालाई उठायो । हुन त राती कुनै त्यस्तो नराम्रो हर्कत नभए पनि आफ्नो सोचका कारण सरिना राती भई । विस्तारै आफैलाई सम्हाल्दै दैनिक कि्रयाकलापमा लागि । उसलाई घरमा साथीको आवश्यकता महसुस भैरहेथ्यो । विवाह गरेको तीन वर्ष वितिसक्दा पनि सन्तान नजन्माउनुलाई आफ्नो एक्लोपनका कारक मान्न थालि । यदि विवाह गर्न नपाई सन्तान जन्माएको भए अहिले उससंग दुईवर्षको छोरो वा छोरी हुन्थी । अनि रविको अनुपस्थितिमा ती सन्तान नै उसका मित्र हुन्थे । उसलाई घरमा एक्लो महशुस गर्नु पर्ने थिएन । रविले वेलावेलामा इमेल अनि फोन गर्दथ्यो । तर श्रीमानको अनुभुति बोलीमा भन्दा पनि उसंगको सामिप्यतामा हुन्छ । सन्तान नभएका कारण लोग्नेमान्छेले आफ्नी श्रीमती सजिलै भुल्न सक्ने कुराहरु सरिनाका साथीहरुले सुनाउँदा सरिनामा पनि चिसो पस्दथ्यो । हुन पनि श्रीमान्हरुले विवाह पश्चात श्रीमतीभन्दा आफ्नो भावि पुस्ताका रुपमा जन्मने सन्तानहरुको वढि माया गर्छन । सासु ससुरासंग वस्दा नै सन्तान जन्माइ हाल्नु पर्छ नत्र त पछि सन्तान हुर्काउन गाह्रो भईहाल्छ नी यी यस्ता कथनहरु सुन्दा सुन्दै सरिनाको कान पाकिसकेको थियो । के त विवाह हुन नपाई सन्तान जन्माई हाल्नु ठिक हो त स्वतन्त्र पूर्वक जीवन गुजारी रहेको मानिसले जव विवाह गर्छ ऊ वन्धनमा वाधिन्छ । विभिन्न कि्रयाकलापहरुमा वन्देज लाग्छ । जव सन्तान जन्मिन्छ तव सम्पूर्ण जीवननै सन्तानमा सर्मपण हुन्छ । ऊ आफू जीउन चाहन्थी उसले आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण रुपमा अर्थ बुझिसकेकी थिइन । महिलाहरुले सन्तान जन्माउने उमेर भनेको २५ देखि ३० वर्षलाई उत्तम मानिने कुरा सरिनालाई थाहा थियो । जुन उनले पार गरीसकेकी थिइन । तर ३५ वर्ष अगावै सन्तान जन्माउनै पर्छ भन्ने कुरालाई हेक्का राखेकी थिई । उसले गरेको योजना अनुसार विवाह गरेको तीन वर्षपछिको समय सन्तानका लागि छुट्याए पनि त्यस वखत भने रवि साथमा थिएन । सन्तानलाई वेवास्ता गर्दै पछि सार्दै आएकी सरिनालाई अहिले भने आमा वन्न नपाएकीमा खेद छ । सन्तान नभएका कारण रवि समयमै फर्कने वा नफर्कने कुरामा पनि दोधार छ । उसलाई राती संगै सत्नका लागि रविको आवश्यकता छ अनि रविको अनुपस्थितिमा छोरा वा छोरी संग न्यानो मायाका साथ सुत्न रहर जागेको छ । उसलाई हरेराम जस्ता व्यक्तिहरुसंग सुत्नु पर्ने बाध्यता अनि मनमा आउने अनेकौं रोमान्चित तर्कनाहरुले आजकल सताई नै रहन्छ।
Home | Gallery | Portfolio | Article | Service | Download |